Mourinho oo Saacado yar ka hor intaan la CEYRIN ogaaday labo XIDDIG oo waa Wayn ay la soo wareegeyso Man United bisha Janaayo!!….(Waa kuwee??) – Gool FM
Mourinho oo Saacado yar ka hor intaan la CEYRIN ogaaday labo XIDDIG oo waa Wayn ay la soo wareegeyso Man United bisha Janaayo!!….(Waa kuwee??)
Byare December 20, 2018
(Manchester) 20 Dis 2018. Manchester United ayaa Ceyrisay Jose Mourinho talaadadii, kaddib natiijo xumi ay ugu dambeysay guul daradii 3-1 ay kala kulmeen kooxda ay sida wayn u coltamaan ee Liverpool.
Yeelkeede, waxaa la warinayaa in macalinka reer Portugal uu ogaaday labo xiddig oo waa wayn ay Red Devils la soo wareegayaan bisha Janaayo Saacado yar ka hor inta aan kooxda laga Ceyrin.
Wuxuu ogaaday inay kooxda dooneyso inay soo qaadato xiddiga reer Brazil ee weerarka kaga ciyaara Juventus Douglas Costa iyo waliba daafac dhexe oo adag.
Mourinho ayaa wax badan ka cabanayay inay kooxdu ku fashilantay inay u keento daafac dhexe oo tayo badan leh, laakiin waxay iminka u muuqataa inay Man United la soo wareegi doonto Daafac dhexe iyo waliba weeraryahan horleh.
The Sun ayaa warinaya in Man United ay Muhimad wayn u leedahay la soo wareegista Weeraryahan horleh si la mid ah Daafac Dhexe.
Juventus ayaa Costa 36 milyan uga soo iibsatay Bayern Munich kaddib markii uu sanad amaah ah ku qaatay Turin.
Balse tan iyo sidii ay Camaaliqada reer Talyaani 100 milyan ugu soo iibsatay Cristiano Ronaldo, 28-jirka reer Brazil ayaa keydka saaxiib la noqday oo ilaa iminka xilli ciyaareedkan waxaa lagu soo bilaabay afar kulan oo qura.
United ayaa iminka u muuqatay inay lacago ku qarash gareyn doonto sida ay u heli lahayd adeega Costa iyo waliba daafac dhexe sida midka Tottenham Toby Alderweireld.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda PSG oo weerar ku qaaday Barcelona sababa la xiriira Adrien Rabiot
Heung-Min Son oo looga yeeray Dalkiisa isagoon seegi doona kulamo Muhiim u ah Tottenham